Global Voices teny Malagasy » Maraoka: Manohitra ny fampijaliana, na aiza na aiza · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 13 Oktobra 2010 13:43 GMT 1	 · Mpanoratra Hisham Almiraat Nandika avylavitra
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Alzeria, Maraoka, Ady & Fifandirana, Fahalalahàna miteny, Hafanàm-po nomerika, Media sy Fanoratan-gazety, Politika, Tanora, Zon'olombelona
Indray nitsangana ireo manampahefana Maraokana tamin'ity herinandro ity, nisesy niatrika kamera mba haneho ny fahatafintohinan-dry zareo tamin'ny nambàra ho fisamborana sy fanaovana herisetra tamin'i Mustapha Salma Ould Sidi Mouloud  [Fr] nataon'ny Mandantehezana Polisario , vondrona mpitaky fizakan-tena tohanan'i Alzeria ary miady ny maha-masimandidy eo amin'i Sahara Andrefana  amin'ny maraokana. Mustapha Salma, mpitantana ambony taloha tao amin'ny polisin'ny Mandantehezana Polisario dia nampangain'ny vondrona mpitaky fizakan-tena ho namadika, taorian'ny nankalazàny ampahibe-maso ny tetikadin'ny fahavitantena  [Ar], naroson'ny Maraokana hamahàna ny olana efa ho telopolo taona mahery izao. Tsy takona hafenina ny tantaran'i Mustapha Salma noho izy ity mandrakotra saika ny gazety rehetra ao Maraoka mihitsy, mirantiranty amin'ny takelaka voalohan'ireo gazety ao an-toerana ny sariny. Ireo mpampita vaovao ofisialy rehetra dia samy nanameloka daholo ny Polisario sy ny alzeriana ao andamosin-dry zareo ho nanao tsinontsinona ny zon'i Mustapha Salma haneho hevitra an-kalalàhana sy noho ny tahotr'izy ireo fa sao hampiasàna herisetra izy. (Toa hoe efa navotsotra i Mustapha Salma, raha ny tatitra azo .)
Raha nahatonga resabe mikasika ny tsy fanajàna zon'olombelona ataon'ny Mandantehezana Polisario sy ny fitondram-panjakana alzeriana ity raharaha ity, ny sasany tamin'ny mpitoraka bilaogy kosa dia naneho ny alahelony noho ny tsy firaharahian'ireo mpampita vaovao mahazatra sy ny governemanta Maraokana momba ny zava-manjo ilay tanora Maraokana iray , Fodeil Aberkane. Io no raharaha tena anatiny, saingy tantara tena mampivarahontsana mikasika tanora iray, izay ny zony fototra mihitsy, ny zo ho velona, no nolavina.
37 Taona ity tra-pahavoazana ity tamin'izany ary ny fahafatesany tampoka tany amin'ny tobin'ny polisy tao an-tanànan'i Salé fahiny, akaiky an'i Rabbat renivohitra, ho an'ny ankamaroan'ireo mpitoraka bilaogy, izay mahatadidy ny “Vanim-potoan'ny Firaka” (Years of Lead) , no vaninandro nanjombona ho an'ny fitondram-panjaka, ny Mpanjaka Hassan II, rehefa zavatra tsy maintsy hizàrana iainana isan'andro ny herisetra sy sotasotan'ny olom-panjakana, tsy maintsy miaina miaraka amin'izany ny Maraokana.
Nosamborina tamin'ny 11 Septambra 2010 i Fodeil, ary nampangaina ho mpanjifa rongony mahery vaika (cannabis). Taorian'ny 48 ora laniny tany am-ponja dia nanapa-kevitra hamotsotra azy ny mpitsara. Andro vitsy taorian'izay dia niverina tany amin'ny biraon'ny polisy i Fodel nitaky ny hamerenana aminy ireo fananany manokana: moto iray sy finday iray. Nisy fifanolanana nitranga nanaraka izay ary dia tany am-ponja indray i Fodeil, nampangaina ho “naniratsira manampahefana teo ampanatanterahana ny andraikitr'izy ireo.” Roa andro taorian'io dia nafindra tany amin'ny hopitaly lehibe tao Rabbat izy, toerana nolazaina ho nahafatesany. Tsy isalasalàna ho an'ny fianakaviany sy ny namany ny anton'ny nahatonga amin'izao fiafaràna nampalahelo loatra izao  [Fr]: ny sotasota sy ny herisetran'ny polisy. Nisy fanadihadiana nosokàfana, saingy hatramin'izao dia tsy misy ny fiampangàna natao an'ireo olona ahiahiana ho voasaringotry ny fahafatesan'i Fodeil Aberkane.
Nisarika ny sain'ny mpitoraka bilaogy maro sy ireo mafàna fo anaty aterineto ilay tantara satria nitranga indrindra tao anatina fotoana nampikororosy ny fahalalàhan'ny asa fanaovan-gazety teto amin'ny firenena , ary satria koa mampahatsiahy antsika an'izany ilay mpanoratra sady mpitoraka bilaogy, Laila Lalami , tsy tranga maningana akory io:
Tsy zava-maningana akory i Fodail Aberkane. Nandritra ireo taona vitsy lasa, be ny fitarainana momba ny herisetra nolazaina fa nataon'ny polisy tao Maraoka tamina fotoana maro samihafa. Roa taona lasa izay, Zahra Boudkour, vehivavy mpianatra iray 21 taona avy amin'ny Anjerimanontolon'i Marrakech, no voasambotra noho ny fandraisany anjara tamina hetsika iray nataon'ny mpianatra. Naboridana izy, nodarohana, saingy tsy nisy na iray aza nitondra fanazavàna mikasika ny herisetra nozakainy. Nandritry ny fifanolànany tamin'ny polisin'ny Marrakech, mpianatra iray hafa avy amin'ny Anjerimanontolo, Abdelkebir El Bahi, no nahita an'izay hoe natsipy avy any am-baravarankelin'ny rihana fahatelon'ny trano fandrian'ny mpianatra. Amin'izao fotoana dia amin'ireny seza misy kodiarana ireny izy mandra-pahafatiny. Ry Boudkour sy El Bahi indray niharan'ny herisetra ara-nofo sy ny fampijaliana noho ny hevitra sy ny idealy arahany. Nanàndrana nitaky ny moto-ny i Fodail Aberkane.
Bill Day manoratra ao amin'ny ‘the a la menthe’ dia manaiky fa :
Satria tsy olo-malaza ireo niharam-pahavoazana dia nangirifiry sy maty tsy hitan'ny fampahalalam-baovao Tandrefana izy ireny — izay lavitry ny maso moa toa hoe lavitry ny fo. Raha nanao veloma ny “Vanim-potoanan'ny Firaka” imasom-bahoaka ny fitondram-panjaka, fotoana izany nahitàna ny fampijaliana ireo tsy nitovy hevitra ara-politika fony faha- Hassan II, ny tranga toy izay lazain'i Lalami dia toy ny felaka tehamaina mandrivorivo miantefa amin'ny endrika feno fahombiazana aderaderan'ny mpitondra ankehitriny, indrindra indrindra fa hoe ampiarahana amin'ny fanampenam-bava misoko mahazo ny fampitam-baovao malalaka.
Ilay mpitoraka bilaogy sady mafàna fo Najib Chaouki  [Ar] dia namorona vondrona Facebook iray antsoina hoe “Samy ianjadian'ny Fampijaliana Daholo Isika Rehetra,”  izay ilazàny ao anatin'ny teny fampidirana ny amin'ny tokony hanenjehana haingana sy henjana ireo tomponandraikitra amin'io heloka io.”
Ilay mpitoraka bilaogy Larbi dia miampanga ny fitsara-mitanila ataon'ny governemanta Maraokana  [Fr]. Hoy izy manoratra:
Raha toa ity governemanta ity mba mànana, na dia kely monja aza amin'ny atao hoe haja amam-boninahitra, dia tokony ho nitondra teo anatrehan'ny fitsarana izay namono an'i Fodail Aberkane haingana araka izay tratrany, farafaharatsiny rehefa tsy te-ho matin'ny henatra. Ary ny momba ny fampijaliana, toa tsy sahintsika akory ny misaina hoe indray andro any anie ka mety ho foana izany, raha toa mbola mandrakizay no fijery azy ao Maraoka.
Nahazoana sonia maherin'ny 300 ny fanangonan-tsonia iray tanaty aterneto ho “Fampitsahàrana ny Fampijaliana sy ny Herisetra ataon'ny Polisy ao Maraoka,” .
Mpitoraka bilaogy sy mpampiasa Twitter maro no nizara sy namoaka sary toy ity manaraka ity izay mivaky hoe: “Makhzen: Mamono ny Polisy. Raha tianao ny hitohizan'izany, akombony ny vava.”
Ny hoe Makhzen dia teny enti-manondro ny sampan-draharaham-pitondràna Maraokana.
Ilay mpahay lalàana sady mpitoraka bilaogy Ibn Kafka dia manome ny fomba famakiny  [Fr] ny antony ao ambadiky ny maha-raiki-tampisaka ny fampijaliana ao Maraoka:
Ny fampijaliana dia fitaovam-pahefana tsy foin'ny fitondrana Maraokana havela, saingy ireo vokany ratsy eo amin'ny sehatra anatiny sy iraisam-pirenena, io no ezahany fehezina. Rehefa tsy misy politika anatiny matotra sy tsindrin'entam-pahefana, dia mazava loatra raha ny fipatrapatraky ny avy amin'ny fampahalalàm-baovao sy ny ara-diplaomatika no mifehy ny safidy ho fampandriana fahalemana ampiasain'ny Makhzen.
Raha ny mikasika ny Fampahalalam-baovao Tandrefana indray, manazava ilay mpitoraka bilaogy…
Ny hany ahitàn-dry zareo an'i Maraoka dia amin'ny alàlan'ny resaka maha-tatsinanana/Islamisma/fampihorohoroana – ary ao anatin'izay fijery izay, tsy nahafeno ny fepetra ilaina i Fodail Aberkane.
Ny fanomezam-pahefana tafahoatra, tsy voafehy ho an'ny polisy mazàna no mitondra ho amin'ny fanararaotam-pahefana, toy izay anoratan'i Riad Essebai azy ao amin'ny bilaogy Robin des Blogs  [Fr]:
Sady tsy voalohany no tsy mbola ho ny farany akory i Aberkane amin'ireo hianjadian'ny fampijaliana ataon'ny rafitry ny polisy, izay ao anatiny ao ny manampahefan'ny polisy dia sady mpitsara no mpampihatra lalàna. Ity fahefana “tsy refesi-mandidy” ity no tena mpanao heloka bevava amin'ity raharaha ity, ary io no tokony hotoherintsika.
aboulahab, manoratra ao amin'ny bilaogy C.J.D.M.  [Fr] (Circle of Young Moroccan Idiots – Faribolan'ireo Tanora Marokana Mitapy) dia manainga ny vahoaka hampiaka-peo:
Ho tsaroan'ny tantara daholo ny rehetra ankoatry ny tari-dositra. Ampy izay ny fahambanian-tsaina e. Mila olo-maventy i Maraoka. Avelao hiseho izy ireny. Sa efa taranaka mpiasam-bahoaka mpanara-davahana sy vahoaka moana isika?
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/10/13/9904/
 Mustapha Salma Ould Sidi Mouloud: http://fr.wikipedia.org/wiki/Moustapha_Salma_Ould_Sidi_Mouloud
 Mandantehezana Polisario: http://en.wikipedia.org/wiki/Polisario_Front
 Sahara Andrefana: http://en.wikipedia.org/wiki/Western_Sahara
 nankalazàny ampahibe-maso ny tetikadin'ny fahavitantena: http://www.youtube.com/watch?v=RF1NqtOoRQo&feature=related
 Toa hoe efa navotsotra i Mustapha Salma, raha ny tatitra azo: http://www.map.ma/eng/sections/home/morocco_welcomes_ann/view
 Years of Lead): http://en.wikipedia.org/wiki/Years_of_lead_(Morocco)
 Tsy isalasalàna ho an'ny fianakaviany sy ny namany ny anton'ny nahatonga amin'izao fiafaràna nampalahelo loatra izao: http://www.libe.ma/La-jeunesse-Ittihadie-organise-ce-vendredi-un-sit-in-de-protestation-Fodail-Abrkane-meurt-sous-la-torture-a-Sale_a14090.html
 nampikororosy ny fahalalàhan'ny asa fanaovan-gazety teto amin'ny firenena: https://globalvoicesonline.org/2010/10/05/morocco-another-magazine-bites-the-dust/
 mampahatsiahy antsika an'izany ilay mpanoratra sady mpitoraka bilaogy, Laila Lalami: http://lailalalami.com/2010/i-am-fodail-aberkane/
 manaiky fa: http://www.williamsonday.com/morocco/archives/2010/10/big-brother-wat.html
 Najib Chaouki: http://rihab-alhoria.blogspot.com/2010/09/blog-post.html
 vondrona Facebook iray antsoina hoe “Samy ianjadian'ny Fampijaliana Daholo Isika Rehetra,”: http://www.facebook.com/group.php?gid=148513381852254
 Larbi dia miampanga ny fitsara-mitanila ataon'ny governemanta Maraokana: http://www.larbi.org/post/2010/09/Pour-Fodail-Aberkane-mort-sous-la-torture?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+larbi+(Comme+une+bouteille+jet%C3%A9e+%C3%A0+la+mer!)
 fanangonan-tsonia iray tanaty aterneto ho “Fampitsahàrana ny Fampijaliana sy ny Herisetra ataon'ny Polisy ao Maraoka,”: http://www.gopetition.com/petition/39498.html
 Ibn Kafka dia manome ny fomba famakiny: http://ibnkafkasobiterdicta.wordpress.com/2010/09/25/un-peuple-na-quun-ennemi-dangereux-cest-son-gouvernement/
 anoratan'i Riad Essebai azy ao amin'ny bilaogy Robin des Blogs: http://www.docteurho.com/index.php/2010/10/voici-pourquoi-aberkane-est-mort/